Kow iyo toban ergo oo ugu baaqay hogaamiyaha mucaaradka in uu ... | Universal Somali TV
Kow iyo toban ergo oo ugu baaqay hogaamiyaha mucaaradka in uu aqbalo madaxweynaha Uhuru Kenyatta inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Kenya.
11 ka mid ah danjirayaasha wadamada caalamka u jooga Kenya ayaa gu baaqeen hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga inuu aqbalo madaxtinimada in Uhuru Kenyatta.
Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ku adkeysanaya inuusan Uhuru Kenyatta uusan si sharci ah sanadkii tagay ugu guuleysan kursiga madaxtinimada sidaa awgeedna aysan u aqoonsaneyn inuu yahay madaxweynaha dalka.
Safiiradan oo uu hor kacayo danjiraha Maraykanka ee dalka Robert Godec ayaa sheegay in garabka mucaaradka ee dalka laga doonayo inay aqoonsadaan in Uhuru Kenyatta iyo William Ruto ay yihiin madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa.
Mr. Godec oo soo saaray bayaan ay saxiixeen dhamaan safiiradan ayaa sheegay in mucaaradka looga fadhiyo inay aqoonsadaan inuu wadanka madaxweyne leeyahay ka hor inta aanan wax wadahadal ah la qaban.
Waxay sido kale cambareyeen hawlgalada dowlada ee ka dhan ah siyaasiyiinta ka tirsan garabka mucaaradka Nasa.
Dhanka kale dowlada ayay ugu baaqeen inay u hoggaansanto amarada maxkamada oo ay ilaaliso shuruucda ku qeexan dastuurka wadanka laga isticmaalo.
Safiirada bayaankaasi qalinka ku duugay ayaa kala ah Robert F. Godec , danjiraha Maraykanka ee Kenya.
Nic Hailey oo ah safiirka Ingiriiska ee dalka, Jutta Frasch, safiirka Jarmalka, Alison , danjiraha Australia,Sara Hradecky, danjiraha Canada,Mette Knudsen , safiirka Denmark,Anna Jardfelt oo ah ergeyga Sweden, Victor Conrad Rønneberg , safiirka Norway,Frans Makken , safiirka dalka Netherlands,Tarja Fernández , danjiraha Finland iyo dhigiisa Faransiiska Kim Ramoneda .
Kan-xigaShiinaha oo gacan ka geysanaya dhisid...
Kan-horeUNICEF ayaa sheegtay in 1 ka mid ah 4...
41,659,405 unique visits